Noah (2014) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
ကွမျးကွမျးရမျးရမျး Noah ဇာတျလမျးကို ကွညျ့ရှုခံစားရမှာဖွဈပွီး ဖနျဆငျးရှငျ နဲ့ ဖနျဆငျး မှု ဆိုတာ ကို အခွခေံပွီး ရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။ Noah ရဲ့ နဂို မူလဇာတျလမျးကိုပဲ ရိုကျကူးထားပမေယျ့ ဒီကားက လူတှရေဲ့ ယုတျမာ ရကျစကျမှုတှေ၊ ကွမျးကွုတျမှုတှကေို အသားပေး ပွထားပွီး ဒါကွောငျ့လညျး ကမ်ဘာကွီးကို သနျ့စငျပဈဖို့ မကောငျးတဲ့ သူတှကေို ဖကျြဆီးပဈပွီး အပွဈမရှိတဲ့ သူတှကေိုပဲ အစကနပွေနျစ နိုငျအောငျ ဖနျဆငျးရှငျက ရတှေကွေီးစပွေီး ကမ်ဘာကွီးကို ရလှေမျးသှားစခေဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ ကလေးဘဝက ဖတျဖူးတဲ့ Noah ပုံပွငျကတော့ ဖနျဆငျးရှငျက ရဘေေးကပျဆိုကျတော့မှာ ဖွဈလို့ Noah က Ark တဈခု တညျဆောကျပွီး သူ့အနီးက လူတှကေို ကယျတငျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့လို ဆောကျနတေုနျးမှာလညျး သူ့ကို ဘယျသူကမှမယုံကွပါဘူး။ နောကျဆုံး ကွမှ သူတို့ မိသားစုက လူသားတှကေို တတျနိုငျသလောကျကူညီခဲ့ကွပါတယျ။
ဒီကားမှာတော့ ကြှနျတျော ခုနကပွောခဲ့တဲ့ အပွဈရှိသူဆိုတာ Noah တို့အပါအဝငျ လူသားတှအေားလုံးဖွဈပွီး၊ လူသားတှကွေောငျ့ ကမ်ဘာကွီးက ပကျြဆီးတော့မှာဖွဈလို့ လူသားတှအေကုနျ ကို ဖကျြဆီးဖို့ ရကွေီးပေးတာဖွဈပါတယျ။ အပွဈမရှိတာကတော့ တိရိစ်ဆာနျတှဖွေဈပွီး Noah က လှဆေောကျပွီး တိရိစ်ဆာနျတှကေို ကယျတငျပေး ရတာဖွဈပါတယျ….
လှကေို လာလုတဲ့ လူတှနေဲ့ လှကေို ဆောကျပေးထားတဲ့ Stone Giant တှေ ခတြဲ့အခနျး၊ လူတှကေို Stone Giant တှကေ ရိုကျသတျတဲ့အခနျးတှပေါသလို၊ Noah ကိုယျတိုငျက လူသားတှကေ အပွဈရှိသူတှေ၊ တိရိစ်ဆာနျတှကေို သတျဖွတျစားသောကျကွသလို၊ အခငျြးခငျြးလညျး သတျဖွတျ အနိုငျကငျြ့ကွလို့ လူသားတှေ အားလုံး အသကျ မရှငျသငျ့တော့ဘူးလို့ ခံယူထားပွီး ဘယျသူ့ကိုမှ မကယျတငျပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ သူ့ရဲ့သားတှကေိုတောငျမှ မိနျးမမယူစပေဲ တဈယောကျထဲ သတေဲ့အထိ နသှေားရမှာဖွဈပွီး နောကျဆုံး လူဆိုပွီး မကနျြ တော့ အောငျ လုပျဖို့ အထိ ဖနျဆငျးရှငျစကားကို နားထောငျသူဖွဈပါတယျ။
ဇာတျကားက စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးပမေယျ့၊ ဖနျဆငျမှု အကွောငျး ကို အဓိက ရိုကျကူးထားတာကွောငျ့ ဘာသာ ရေး အယူ မသီးပဲ ဒီတိုငျးပဲ သှားကွညျ့ဖို့ အကွံပေးပါရစေ။ ဇာတျလမျးကလညျး သိနပွေီးသားဖွဈသလို ထူးထူးခွားခွား လှညျ့ကှကျလညျး နညျးပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ဘာသာရေးနညျးနညျး ဆနျ နလေို့ ဇာတျကားကောငျး တဈကား တော့ ဖွဈမလာပါဘူး။ အိုငျဒီယာ ကောငျး၊ graphic ကောငျးကောငျး နဲ့ ရိုကျထားပမေယျ့၊ ၂ နာရီကြျော ကွာတဲ့ ဇာတျကားမှာ အကျရှငျ ဇာတျဝငျခနျး ကောငျး ကနညျးနညျးပဲ ပါလို့ ပငျြးစရာတော့ ကောငျးပါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးလို့ သှားတော့ကွညျ့ဖူးသငျ့ပါတယျ။ ဘာသာရေး အမွငျနဲ့ကွညျ့ရငျတော့ ဇာတျကားကောငျး ဖွဈမှာမဟုတျ ပမေယျ့၊ သာမနျကားတှထေကျတော့ သာတယျလို့ပွောလို့ရပါတယျ။
ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း Noah ဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပြီး ဖန်ဆင်းရှင် နဲ့ ဖန်ဆင်း မှု ဆိုတာ ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Noah ရဲ့ နဂို မူလဇာတ်လမ်းကိုပဲ ရိုက်ကူးထားပေမယ့် ဒီကားက လူတွေရဲ့ ယုတ်မာ ရက်စက်မှုတွေ၊ ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကို အသားပေး ပြထားပြီး ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာကြီးကို သန့်စင်ပစ်ဖို့ မကောင်းတဲ့ သူတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်ပြီး အပြစ်မရှိတဲ့ သူတွေကိုပဲ အစကနေပြန်စ နိုင်အောင် ဖန်ဆင်းရှင်က ရေတွေကြီးစေပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ရေလွှမ်းသွားစေခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကလေးဘဝက ဖတ်ဖူးတဲ့ Noah ပုံပြင်ကတော့ ဖန်ဆင်းရှင်က ရေဘေးကပ်ဆိုက်တော့မှာ ဖြစ်လို့ Noah က Ark တစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး သူ့အနီးက လူတွေကို ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လို ဆောက်နေတုန်းမှာလည်း သူ့ကို ဘယ်သူကမှမယုံကြပါဘူး။ နောက်ဆုံး ကြမှ သူတို့ မိသားစုက လူသားတွေကို တတ်နိုင်သလောက်ကူညီခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီကားမှာတော့ ကျွန်တော် ခုနကပြောခဲ့တဲ့ အပြစ်ရှိသူဆိုတာ Noah တို့အပါအဝင် လူသားတွေအားလုံးဖြစ်ပြီး၊ လူသားတွေကြောင့် ကမ္ဘာကြီးက ပျက်ဆီးတော့မှာဖြစ်လို့ လူသားတွေအကုန် ကို ဖျက်ဆီးဖို့ ရေကြီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်မရှိတာကတော့ တိရိစ္ဆာန်တွေဖြစ်ပြီး Noah က လှေဆောက်ပြီး တိရိစ္ဆာန်တွေကို ကယ်တင်ပေး ရတာဖြစ်ပါတယ်….
လှေကို လာလုတဲ့ လူတွေနဲ့ လှေကို ဆောက်ပေးထားတဲ့ Stone Giant တွေ ချတဲ့အခန်း၊ လူတွေကို Stone Giant တွေက ရိုက်သတ်တဲ့အခန်းတွေပါသလို၊ Noah ကိုယ်တိုင်က လူသားတွေက အပြစ်ရှိသူတွေ၊ တိရိစ္ဆာန်တွေကို သတ်ဖြတ်စားသောက်ကြသလို၊ အချင်းချင်းလည်း သတ်ဖြတ် အနိုင်ကျင့်ကြလို့ လူသားတွေ အားလုံး အသက် မရှင်သင့်တော့ဘူးလို့ ခံယူထားပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မကယ်တင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သူ့ရဲ့သားတွေကိုတောင်မှ မိန်းမမယူစေပဲ တစ်ယောက်ထဲ သေတဲ့အထိ နေသွားရမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး လူဆိုပြီး မကျန် တော့ အောင် လုပ်ဖို့ အထိ ဖန်ဆင်းရှင်စကားကို နားထောင်သူဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်ကားက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပေမယ့်၊ ဖန်ဆင်မှု အကြောင်း ကို အဓိက ရိုက်ကူးထားတာကြောင့် ဘာသာ ရေး အယူ မသီးပဲ ဒီတိုင်းပဲ သွားကြည့်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ။ ဇာတ်လမ်းကလည်း သိနေပြီးသားဖြစ်သလို ထူးထူးခြားခြား လှည့်ကွက်လည်း နည်းပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဘာသာရေးနည်းနည်း ဆန် နေလို့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကား တော့ ဖြစ်မလာပါဘူး။ အိုင်ဒီယာ ကောင်း၊ graphic ကောင်းကောင်း နဲ့ ရိုက်ထားပေမယ့်၊ ၂ နာရီကျော် ကြာတဲ့ ဇာတ်ကားမှာ အက်ရှင် ဇာတ်ဝင်ခန်း ကောင်း ကနည်းနည်းပဲ ပါလို့ ပျင်းစရာတော့ ကောင်းပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ သွားတော့ကြည့်ဖူးသင့်ပါတယ်။ ဘာသာရေး အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ ဇာတ်ကားကောင်း ဖြစ်မှာမဟုတ် ပေမယ့်၊ သာမန်ကားတွေထက်တော့ သာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
Option2sharer.pw 650 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 650 MB SD (480p)
Option4server.mfile.cloud 650 MB SD (480p)
Option7storage.msubmovie.com 1.6 GB HD (1080p)
Option9server.mfile.cloud 3.8 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 11 sharer.pw 3.8 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 12 yuudrive.me 3.8 GB FHD (1080p) DTS 5.1